8 Waxbarashada CCIS ee CCCO ee muhiimka ah iyo shahaadooyinka Cisco
1. Tababbarka Tababaraha IPv6
Ujeeddooyinka Hawlaha Koorsada ee IPv6 Camp Campus:
Tilmaamaha Xerada IPv6 Camp Lahore:
2. Fulinta Cisco Multicast v2.0
Hirgelinta Cisco Multicast v2.0 Ujeeddooyinka Koorsada:
Hirgelinta Cisco Multicast v2.0 Essentials:
4. CISCO CCNP Qaabka iyo beddelidda
CISCO CCNP Ku socoshada iyo beddelidda Shuruudaha:
5. CISCO Qaabka iyo Isdhexgalka CISCO
CCNA Codsi Codsi:
7. Dhibaatooyinka Dhibaatada CCNA - CCNP KHOOT
8. CISCO Tababarka Amaanka ee CISCO
CISCO Tababarka Amniga CCNA Muhiimadda:
Cisco CCNA waa hogaamiyaha guud ee IT-da ee ka caawiya ururrada in ay helaan fursadaha berri iyada oo muujinaya in waxyaabo yaab leh ay dhici karaan markaad horay u dhex gasho ka hor inta aanad gaarin.
Macaamiisha Cisco waxay billaabaan waxyaabo muhiim ah oo qayb ka ah DNA-ga ayaa samaynaaya ururada macaamilka oo ay la shaqeeyaan si ay u aqoonsadaan shuruudahooda oo ay u dejiyaan qorshe horumarinta barwaaqadooda.
Fikradda ah in qorshe-hawleedka loo xilsaaray inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka macaamiisha gaar ahaaneed waxay la jirtay Cisco tan iyo bilowgii. Lamaane Bob Bosack iyo Sandy Lerner, oo labaduba ka shaqeynaya Jaamacadda Stanford, ayaa loo baahan yahay in ay isbarbar dhigaan shaqooyinkooda kala duwan oo ku yaal dhismayaal kala duwan, laakiin ma awoodaan sababtoo ah naqshadaynta cusub.
Hal-abuur waa in loo qaabeeyaa si loo maareeyo xaafadaha kala duwan; iyo sababta keentay in ay ku fashilmaan imtixaankooda - isbedelka badan ee shirarka ayaa la qorsheeyay.
Qaar ka mid ah Jadwalka Tababbarka Tababarka Cisco CCNA & Shahaadooyinka waxaa lagu sheegay hoos:
Jaantuska Hordhaca IPv6 Bootcamp (IPv6) Tababarka Cisco ee loogu talagalay Tababarka Dalabka waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo fahmidda kuwaas oo hadda la yaqaan IPv4 ujeedada iyo udubdhexaadinta si ay u fahmaan farqiga u dhexeeya IPv6 ujeedada iyo habaynta.
Koorasku wuxuu ku bilaabmayaa inuu caddeeyo IPv6 qaab dhismeedka dhismaha, iyo sidoo kale heshiisyo cusub oo ku jira IPv6 kaas oo ku xeeldheer cinwaanka Protocol Protocol (ARP) iyo Protocol Configuration Protocol (DHCP, tusaale, IPv6 Neighbor Discovery Protocol (NDP).
Noocyada kala duwan ee goobaha IPv6 waxaa lagu baari doonaa hadafka aad ku ogaan karto sida loo ogaado iskahorimaadka udhexeeya IPv6 multicast, interface oo ku dhow, iyo cinwaanada unicast.
Xilliyadii hore, hababkaasi waxay sidoo kale si fiican u fahmeen IPv6 inay helaan diiwaannada iyo habka aasaasiga ah ee Routing Information Protocol (RIP) ee loogu talagalay IPv6 (RIPng) iyo Furan ugu horeeya (OSPF) ee IPv6 (OSPFv3).
Koorsadan waxaa loogu talagalay khabiiro khaas ah oo u baahan fahamka qoto dheer ee IPv6.
Markaad dhameysato kooraskan, waa inaad haysataa awoodda aad:
Ku dheji IPv6 aduunka oo dhan iyo cinwaanada gaarka ah ee ku xiran interfaces
Fiiri hawlgalka autoconfig iyo sida loo isticmaalo keydka EUI-64 saameyn ku yeesha aqoonsiga interface © 2016 Cisco iyo sidoo kale dibadeeda.
Ka hortag ururinta meelaha la xidhiidha goobaha la dagan yahay
Isticmaal wax-soosaarista dhibaatooyinka si aad u aragto tarjumooyinka gawaarida iyo bandhigyada deriska ka dib markaad IPv6 ping
Qalabaynta OSPFv3 ka faa'iideysiga dhulal badan, tusaale ahaan, aagagga isku-boodhka ah iyo kuwa aan kala duwanayn (NSSA)
Qalabaynta OSPF deriska ah oo ku saabsan tiro badan oo aan la duubin karin waxay u tagaan (NBMA) bedelka qorshaha
Qalabaynta RIPng ee IPv6
U samee dib u habeyn laba dhinac ah OSPFv3 RIPng
Xarunta Tababaraha ee IPv6Shuruudaha Koorsada:
Ka hor intaanad qaadan koorsadan, waa inaad haysataa karti aad ku sameyso raacitaanka:
Sifee qorsheyaal aasaasi ah oo dhisi toos ah LAN-yada
Samee helitaanka internetka
Ma haysta shahaadada CCNA®, ama qiyaas ahaan
Qalabaynta, shaashadda, iyo baaritaanka RIP, Horumarinta IGRP (EIGRP), iyo OSPF
U sharax naqshadeynta jaantuska IPv4
Sharaxaad ka bixi Protocol-ka Xakamaynta Internetka (ICMP) iyo ARP
Hirgelinta Cisco Multicast (MCAST) v2.0 waa koorso soconaya shan maalmood oo ka hadlaya waxyaabaha aasaaska u ah IP-ga, kaas oo ku daraya codsiyada faraha badan, ilaha, dadka qaata, maamulka guud, iyo qawaaniinta IP-ga ee badanaa (tusaale ahaan, Protocol Protocol Independent Independent, PIM) oo loo isticmaalo gudaha gudaha qaybta kormeerka (intradomain). Arrimaha kala duwan ee isweydaarsiga LAN iyo IP faragelin adag ayaa sidoo kale la xaqiijiyay.
Koorsadani waxay bixisaa jawaab gaar ah oo loogu talagalay habka tooska ah ee IP-ga ee alaab-qeybiyaha ama macmiilku abaabulo. Barnaamijyada waxbarashadu waxay bixiyaan qawaaniinta naqshadeynta iyo qallafinta ee isticmaalka IP-ga saarka badan ee wareegyada Cisco. Shaybaaradu waxay si fiican u fahmayaan khibradda gacanta oo la filayo inay si wax ku ool ah u diraan IP-ga.
Kadib markaad dhameysid kooraskan, bartaha wuxuu awood u leeyahay in uu la kulmo bartilmaameedyada guud:
Bixinta IP maamullada badan, si loo qiimeeyo qaabka waxtar leh ee IP farqiga iyo horumarka ay muujinayaan IP farqiga, garwaaqsiyo faa'iidooyinka IP badan iyo calaamadaha la xidhiidha, oo go'aan ka gaara noocyo kala duwan ee codsiyada faro badan leh ujeedo gaar ah oo lagu fahmo habka qotodheer ee IP lakabka meelo badan oo ku yaala macluumaadka ku xirma cinwaanka lakabyada, oo u burburiyo qalabka lagu xakameynayo dooxooyinka faruuqa badan ee aagga LAN.
Nidaamka Badbaadada Iskudhiga ah ee Madax-bannaan (PIM-SM) oo ah qaabka ugu habboon ee IP-ga ah ee la qabsashada ee la qabatimay si uu u qaato heerarka hirgelinta shirarka iyo waxyaabo aan macquul ahayn, u roonaan go'aan qaadashada oo lagu daro hababka kala-guurka, SM ee badan oo isku dhafan IP-kiis oo abaabulaya ururada.
Macluumaadka iyo dabacsanaanta ardaygu barto waa inuu horay u socdaa kooraskan waa sida soo socota:
Shahaadada Agaasimayaasha Shabakadda Cisco Certified Network (CCNA).
Fahamka shaqada iyo kartida habka loogu talagalay isku-xireyaasha Cisco iyo qalabka LAN.
Hirgelinta Cisco IP Routing (ROUTE).
Khabiirka Taageerada Midaysan ee Cisco waxaa loogu talagalay in lagu tijaabiyo macluumaadka bartaha ee aasaasiga ah ee Nidaamka Iskudhafka Midaysan ee Cisco iyo awooddooda si ay u hirgeliyaan jawiga Xarunta Data Center. Xarunta Macluumaadka Cisco Caawinaada Kombuyuutarada Taageerada Khabiirada takhasuska ayaa sidoo kale isku dayi doona qaybaha la socda:
Ku-oogidda Nidaamka Xisaabinta Iskudhafka Cisco ee B iyo C
Nidaamka Isku-dubbaridida Isku-dubbaridka ee Cisco ee ku-meel-gaadhka ah ee hawsha beeraha iyo qaabka beddelidda
Qalabka Cisco Nexus ayaa goynaya qoyska.
Cisco Certified Network Professional (CCNP) Soodhaweynta iyo shahaadada beddelidda ayaa ansixiya awooda lagu diyaarinayo, dejiyo, xaqiijiyo oo baaro shabakadaha isku xira xudduudaha dhow iyo kan ballaaran waxayna si wadajir ah ula shaqeeyaan masuuliyiinta ku saabsan ilaalinta amniga, codka, fogeynta iyo fiidiyowga.
CCNP Routing and Switching certification waxay ku habboon yihiin kuwa ka yar hal sano oo ka mid ah maamulka nidaamka nidaamyada iyo kuwa diyaarka u ah inay dardar galiyaan kobcintooda ayna u shaqeeyaan si habboon nidaamka nidaamka adag.
Shakhsiyaadka ku guuleysta habka CCNP Loo-shaqeeyaha iyo Is-beddelida waxay muujiyeen awooda looga baahan yahay qaybaha ganacsiga waaweyn, tusaale ahaan, abaabulida naqshadeynta, dhisidda dhismaha, naqshadeeyaha qaabdhismeedka ama khibradda nidaamka.
Iskuduwidda iyo beddelidda macluumaadka shirarka ee shahaadadani waxay siin doontaa aasaas joogta ah maaddaama kuwaanu u dhigmaa ay sidoo kale ku xiran yihiin shabakadaha muuqaalka ah ee maanta iyo hababka la isku habeeyey ee berrito.
Cisco CCNA Qalabaynta Caddeynta iyo shahaadaynta shahaadada ama shahaadada Cisco CCIE waxay ku noqon kartaa mid muhiim ah.
Maadaama ganacsatadu ay u guuraan moodooyinka ku salaysan maaraynta, qaybta iyo qaababka loo baahan yahay ee khabiir ku shaqeeya nidaamka xarumaha ayaa horumaraya oo ka muhiimsan waqti kasta oo kale xasuusta dhawaanta.
Si loo qorsheeyo nidaamkan nidaamka, shahaadada gudbinta iyo isbedelka CCNA maaha kaliya inaad ku sameysid barashada horumarinta aasaasiga ah, laakiin waxaad ku dammaanad qaadeysaa inaad la xiriirto habka ugu habboon ee loo baahan yahay si loogu qoondeeyo soo jiidashada cusub ee cusub.
Cisco Certified Network Associate Voice (CCNA Voice) wuxuu aqbalaa macluumaadka heerka xidhiidhka iyo dabacsanaanta loo baahan yahay si loo xakameeyo codka habeynta. Cisco CCNA Certificate Voice waxay xaqiijineysaa in awoodda loo baahan yahay ee qaybo gaar ah oo shaqeynaya codka horumarinta, tusaale ahaan, madaxa horumarinta codka, takhasuska codka, iyo agaasimaha codka. Aniga
t ogolaanaya waxqabad ee ku jira casriyeynta VoIP, tusaale ahaan, IP PBX, xidhiidhka IP, taleefanka gacanta, xakamaynta telefoonka, iyo fariimaha taleefoonka.
Sahanka sahanka shahaadada CCNA ee CCNA oo la ogaanayo iyo macluumaadka lagu cadeeyay Maareeyaha Isgaadhsiinta Cisco Unified. Sida caadiga ah waxaa isticmaala jimciyado ballaadhan, tusaale ahaan, dawladaha, ururada waaweyn, iyo jaamacadaha.
Intaa waxaa dheer, CCNA Voice Certification awoodaha iyo barashada lagu ogaaday Cisco CallManager Express (CME) iyo hababka Cisco Unity Express (CUE) ayaa si joogta ah loo adeegsado ururada dhexdhexaadka ah iyo kuwa yaryar, tusaale ahaan, ururada hoos yimaada wakiilada 2,000, ururada dukaamada, iyo dugsi yar gobollada.
Cisco Caymiska muhiimka ah, Caddeynta iyo isbedelka CCNA ama shahaadada Cisco CCIE waxay noqon kartaa mid muhiim ah.
Imtixaankani waxa uu xaqiijinayaa in rajada midho badani ay leedahay barashada iyo dabacsanaanta muhiim u ah:
Diyaarso oo samee dhaqdhaqaaqa caadiga ah ee hawlgalada isku dhafan oo shabakadaha isdhaafsada oo is dhaafsiiya
U isticmalaab dhaqannada ku salaysan hal-abuurka iyo habka ITIL hab-nidaamsan oo loola macaamilayo fulinta xalinta dhibaatooyinka
Koorsada la socda waa tababarka la soo jeediyey ee imtixaankan.
Dhibaatooyinka Dhibaatada iyo Joogteynta Nidaamka Cisco IP (SAWIRO)
Cisco Certified Network Security Security (CCNA Security) wuxuu oggolaadaa barashada heerka xidhiidhka iyo dabacsanaanta loo baahan yahay si loo xaqiijiyo shabakadaha Cisco.
Iyadoo la adeegsanayo shahaadada CCNA Security, nidaam ku fiicnaado ayaa muujinaya qaabsamida loo baahan yahay si loo dhiso qaab-dhismeed nabadgelyo leh, oo loo arko khatar iyo jilicsanaanta shabakadaha, iyo khatarta amniga dhexdhexaadka ah.
Nidaamyada waxbarashada ee CCNA waxay muujinayaan dib-u-habeynta amniga xarunta, dhisidda, dhibaatooyinka iyo la socoshada qalabka galka si loo ilaaliyo qummanaanta, sirta iyo helitaanka macluumaadka iyo qalabyada, iyo karti-xirfadeedka horumarka Cisco u adeegsanayo qayb ka mid ah qaab-dhismeedka nabadgelyada.
Cunniyad kasta oo Cisco ah, CCNA Routing and Switching, ama shahaadooyin kasta oo CCIE ayaa ku noqon kara mid muhiim ah.
Habka ugu wax ku oolka ah ee loo yareeyo Heerka Qadarka Bounce ee boggaaga WordPress
3 Maaddada Tababarada IBM Qofkasta ee Industry waa in la Isticmaalaa